सरकारको कामबारे नेताहरूको प्रतिकृया: जनअपेक्षा पुरा भएनन्, नाम बदिलियो नीति पुरानै
छोटो समयमै सबै परिवर्तन सम्भव नहुने
प्रकासित मिति : २०७५ माघ १३, आईतवार प्रकासित समय : १२:५३
(मुलुकको विकास, संवृद्धि, जनअधिकारको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, स्वदेशमा रोजगारको अवस्था निमार्ण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता तमाम माग राख्दै मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि राजनैतिक दलको अगुवाइमा नागरिकहरुको निरन्तर संघर्ष र पछिल्लो सडक आन्दोलनबाट आएको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा समेत जनताका समस्या उस्तै देखिएका छन । नागरिकहरु गासँ, बाँस र कपासको समस्यामा बाँचिरहेका छन । चिसोमा गरीब बस्तिहरु कठिन जीवन निर्वाह गर्न बाँध्य छन ।
यसरी जनताले ठूलो अपेक्षासहित बलिदानपूर्ण इतिहासबाट ल्याएको नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानै पीडा र समस्या बोकिरहेको देखिन्छ । सिंहदरबारका कुर्सिहरुमा केही नयाँ मानिसहरु पुगेंपनि त्यहाँबाट जनताको अपेक्षा अनुसारको काम देखिने गरी हुन सकेको छैन । भोका पेटहरु अहिले पनि खाली नै छन, रोजगारीको समस्या बोकेर हजारौं नेपाली प्यारो देश र परिवारलाई छाडेर अर्काको मुलुकको लागि काम गर्न बाध्य छन । बिरामी हुँदा औषधी उपचार नपाएर नागरिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउँनु पर्ने अवस्था आँखा अगाडि नै छ, यि समस्याको निकास के कसरी सम्भव छ ! सरकार असफल भएकै हो त ? के जनताले फेरी यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आएको हो ? यि र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु धेरै नागरिकको मनमा उब्जिनु स्वभाविक छ ।
हामीले लामो समयदेखि समाज रुपान्तरणको लागि राजनीतिक अभियानमा लागेका एक जना नेता सीपी मैनाली, मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत भैसकेका हाल सत्ताँरुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपाका अर्का युवा नेता तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको धारणा आजको हरपल वहसमा प्रस्तुत गरेका छौं । यो धारणा उनीहरुसँग भेटघाट वा हाम्रो अलग्गै कुराकानीका क्रममा भने लिइएको होइन, उनीहले यहि शनिबार (मिति २०७५ माघ १२ गते) तनहुँमा आयोजित एकदेव आलेको ५० औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा सरकार सञ्चालन र जनताको अपेक्षाबारे बोलेको विषय वस्तुका आधारमा समावेश गरेका हौं । अतः पाठकवृद, जनअपेक्षाबारे के भन्छन त उनीहरु ? तल हेर्नुहोला, उनीहरुको धारणा यस्तो छ !)
माधवकुमार नेपाल/पूर्वप्रधानमन्त्री- नौ महिने सरकारको जस्तो काम भएन
अहिलेको सरकारले २०५२ सालको कम्प्युनिष्ट सरकारको नौ महिने कार्यकालको जस्तो लोकप्रिय काम गर्न नसके पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायतका जनसरोकारका कार्यक्रमहरु सुरू गरिरहेकाले केही आशा गर्नुपर्छ । देशमा समृद्धि आएन, भएन भनेर निराश हुनुभन्दा प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण र विकास गर्दा बाँकी काम, योजनामा लाग्नुपर्छ । मुलुकमा कम्युनिष्ट सरकार छ, यो अधिनायकवादी र तानाशाही हुन सक्दैन । सरकार लोकतान्त्रिक बाटो जनताको काम र अपेक्षामा बढ्छ । छोटो समयमा परिवर्तन सम्भव हुँदैन, तर सबैलाई महसूस हुनेगरी देश विकासको बाटोमा हिडेको छ । एक वर्षभित्र सबै र ठूलो परिवर्तन सम्भव छैन, त्यो हुन सक्दैन ।
सीपी मैनाली/महासचिव नेकपा माले – जनचाहना अनुसार सरकार चलेन
जनचाहना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको देखिन्न । जे गर्छु भनेर भोट मागिएको थियो, त्योअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । बहुमत र सत्तामा पुर्‍याउनका लागि जनताले भोट दिएका थिएनन् तर नेताहरुको ध्यान सत्तामा मात्रै रहेको छ। दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भए पनि एकीकृत सिद्धान्त आउन सकेको छैन । सत्ताँरुढ नेकपा अहिले सिद्धान्तविहीन पार्टी जस्तै बनेकाले काम व्यवहारमा समेत समस्या देखिएको हो । जनताका समस्याहरु हिजोको भन्दा जर्जर छन, सरकार कता के गर्नमा ब्यस्त रहन्छ, त्यो जनताले महसूस गर्न पाएका छैनन् । जनताको जीविका कठिन देखिदैँ आएको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ/प्रवक्ता नेकपा- भनसुनको अन्त्य गर्नुपर्छ
भनसुनको भरमा चल्ने अवस्था अन्त्य गरी प्रक्रियाको आधारमा देश सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । भनसुनका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचारले ठाउँपाउने भएकाले त्यसलाई हटाउनु पर्छ । अझै पनि ९० प्रतिशत माग भनसुनका लागि आउने गरेका छन, त्यसमा हामीले ख्याल गर्नुपछ । कुनै पनि काममा भेदभाव नहुने गरी गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र जनताको अपेक्षामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ र त्यहि ढंगले चलिरहेको छ । अरु कुराहरु विस्तारै पुरा हुँदै जान्छन, सबै एकैपटक सम्भव हुँदैनन् ।